Kukhona iqoqo zonke izindlela ukukhula eyelashes, abakhiqizi owathembisa nomphumela babeyonqoba, phakathi kwabo ezifana: Almea Xlash, Careprost, Magic Glance Intence, Advanced LashAlmea Xlash. Umuthi kwandisa ubude nemivimbo engu-40%, uqinise, ngibenze licace. Iningi lazo babe Ukwakheka yemvelo, kanye nokokuyifaka esakhelwe kwenza kube lula ukusebenzisa cleanser. Ngemva kokufunda lesi sihloko, unganquma ukuthi yini ngeke ezikufanelayo okuyiwa ukukhula eyelashes. Izibuyekezo imikhiqizo abesifazane wanelisekile nazo ehlinzekwe ngezansi.
Izinzuzo nezingozi nebubi kokusebenzisa imali
Girls ababezama ikhambi ukhophe ukukhula, shiya impendulo, okuhle nokubi. Phakathi izinzuzo: uqinisa ukukhula, uyasondla futhi aphulukise, kwenza eyelashes mnyama. Ukwenyuka ukujiya kanye ubude nemivimbo engu. Kusho elula futhi kulula ukusebenzisa. Nebubi: Abaningi bhala ukuthi kwamaphutha musa ukuthola inothi ezincane ukuphendula nomzimba, obonakaliswe kancane ububomvu amajwabu amehlo kanye ukuluma ukukhanya. Futhi, njengoba iphuzu lokususa futhi zibiza kakhulu umkhiqizo.
I-ejenti ukukhula eyelashes Careprost
Ngo ngalokhu izidakamizwa okuxubile kakhulu ukubuyekezwa, abathengi bathi kokubili ngebuhle nebubi. Izinzuzo: eyelashes sikhule eside, kwezinye izimo, mkhulu futhi mkhulu. Nebubi kusukela ukubuyekezwa, baningi. isicelo esingesihle zomuthi, okumele kwenziwe nge nokokuyifaka oyinyumba. Abaningi bakhononda ukusabela okukhulu nomzimba. Ezinye bhala lokho kusho ezibizayo, kunzima kakhulu ukuthola futhi kuba ngokuphelele ukungasebenzi kahle. Futhi wabhala ukuthi ngenxa hormone wesilisa eziqukethwe imoto akuyona izinwele uyaphela inkokhelo lapho idingeke khona, okungukuthi, phezu iminwe nobuso.
I-ejenti ngokuvumelana nezithembiso nomkhiqizi kusiza ukubuyisela impilo namandla eyelashes, kunconywa ukutakula asebenzayo ngemva isandiso wendiza, kuqinisa isakhiwo. Lashes babe eside futhi mkhulu. Abesifazane abasebenzisa imali ukukhula eyelashes, ukubuyekezwa abasele ezimweni eziningi, ubuhle bodwa kuyo. Ukulungiswa ukukhula eyelashes Magic Glance Intence kunezinzuzo zako kanye nebubi. Buhle: unika ngempela imiphumela emasontweni acishe abe mabili. Eyelashes sikhule eside, mkhulu, a mnyama kancane, encishisiwe ukulahlekelwa. Phakathi nemiphumela ethile engathandeki ambalwa ephawulwe kuphela izindleko aphezulu umkhiqizo.
I-ejenti ukukhula eyelashes Advanced Lash
Umenzi uthembisa ngenyanga ukuqinisa nemivimbo engu ngaleso izimpande isakhiwo, ukuvikelwa imiphumela emibi, kanye lokho kuyoba eyelashes Fluffy, eside futhi emuhle. Izimpendulo ezivela abathengi, imiphumela abonakala ngemva kwamasonto amathathu: nemivimbo engu makhula, okwandisa ukukhula kwabo kanye nokunciphisa nezinwele kwenzeka. Izindleko kwezimali kuqhathaniswa ne nenqubo ezimbili ukhophe.
I-ejenti ukukhula eyelashes FEG
Abathengi, zama leli thuluzi ukukhula eyelashes, ukubuyekezwa ushiye ngaphezulu uhlamvu ezimbi. Ngokusho abanye besifazane, umuthi kwandisa ivolumu eyelashes, kodwa ubude ayiguquki. Kodwa iningi imali ngaso sonke akunamthelela kanye kuphela sadlala imali.
Buso ukukhula eyelashes
Ngaphambi kokusebenzisa i-buso, kuzomele uxhumane nodokotela wakho. Amantombazane amaningi kukhona aphendule ngamazwi aqatha iguliswa yezingxenye.
Cream ne umphumela Botox ubuso: incazelo, izakhiwo, izinkomba kanye contraindications, ukubuyekezwa
Penda Brow Henna (Henna ngoba amashiya): Izibuyekezo
Yini Skoromniy ukudla? Ukudeda ukudla kokuzila
Psychology wokuxhumana amadoda: indlela yokuthola okungcono kakhulu kuye
Umuthi 'Debridat ": yokusetshenziswa, intengo
Ingubo ngesitimu - igama sokuvalelisa uyikhethe. Izinzuzo nezingozi nebubi